Mandefitra amin'ny ota ve ny fahasoavana? | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Ny fiainana fahasoavana dia midika fandavana ny ota, tsy milefitra na manaiky an'izany. Manohitra ny fahotana Andriamanitra - halany. Nolaviny ny tsy handao antsika ao anatin'ny fahotantsika ary nandefa ny zanany lahy hanafaka antsika aminy sy ny vokatr'izany.
Rehefa niresaka tamin'ny vehivavy nanitsakitsa-bady i Jesosy dia hoy izy taminy: «Tsy hitsara anao koa aho, hoy i Jesoa. Afaka mandeha ianao, nefa aza manota intsony! » (Jaona 8,11 Fanantenan'ny rehetra). Ny tenin'i Jesosy dia mampiseho ny hohamavoany amin'ny ota ary manome fahasoavana izay manelingelina ny ota amin'ny fitiavana manavotra. Fahadisoana lehibe ny mahita ny fahavononan'i Jesoa ho tonga Mpamonjy antsika ho fandeferana amin'ny ota. Ny Zanak'Andriamanitra dia tonga iray amintsika tokoa satria tsy nandefitra tanteraka ilay hery mamitaka sy manimba izy. Tsy nanaiky ny fahotantsika Izy fa nandray azy io ary nanaiky azy io amin'ny didim-pitsaran'Andriamanitra. Tamin'ny fanoloran-tenany, ny fanasaziana, ny fahafatesan'ny ota manjo antsika, dia nofoanana.
Rehefa mijery ny tontolo lavo iainantsika isika ary rehefa mijery ny fiainantsika manokana dia mazava fa mamela ny ota Andriamanitra. Ny Baiboly anefa dia milaza mazava fa mankahala ny ota Andriamanitra. Nahoana? Noho ny fahasimbana natao tamina antsika. Mampijaly antsika ny ota - manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa; manakana antsika tsy hiaina ao anatin'ny fahamarinana sy fahafenoantsika hoe iza isika, tiantsika. Amin'ny fiatrehana ny fahotantsika, izay nesorina tao anaty sy tamin'ny alalan'i Jesosy, dia tsy manafaka antsika avy hatrany amin'ny vokatry ny ota rehetra Andriamanitra. Saingy tsy midika izany fa ny fahasoavany dia mamela antsika hanohy hanota. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy ny fandeferany amin'ny ota fotsiny.
Amin'ny maha-kristiana antsika dia miaina eo ambanin'ny fahasoavana isika - afaka amin'ny sazin'ny ota indrindra amin'ny soron'i Jesosy. Amin'ny maha mpiara-miasa amin'i Kristy, dia mampianatra sy midera ny fahasoavana isika amin'ny fomba izay manome fanantenana ny olona sy sary mazava amin'Andriamanitra ho toy ny rain'izy ireo izay be fitiavana sy mamela heloka. Nefa miaraka amin'ny fampitandremana ity hafatra ity - tadidio ny fanontanian'ny apostoly Paoly hoe: "Moa ve tsy dia mendrika ho anao ve ny hatsaram-panahy tsy manam-petra mandrakizay sy ny faharetana ary ny fahatokiana? Tsy hitanao ve fa io hatsaram-panahy io no maniry hahodina anao? » (Romana 2,4 Fanantenan'ny rehetra). Hoy koa izy: “Inona no tianay holazaina momba izany? Moa ve isika hitohy amin'ny ota hatrany ka hahatonga ny fahasoavana ho lasa mahery vaika kokoa? Lavitra izany! Matin'ny ota isika. Ahoana no fomba ahafahantsika miaina azy io? » (Romana 6,1-2).
Ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy tokony hampirisika antsika maniry ny hitoetra ao amin'ny fahotantsika. Ny fahasoavana dia fandaharana nomen'Andriamanitra an'i Jesosy tsy vitan'ny hoe hanafaka antsika amin'ny fanamelohana sy ny mahamenatra ny ota, fa koa amin'ny herin'ny maizina sy manandevo. Araka ny nolazain'i Jesosy: "Izay manota dia andevon'ny ota" (Jaona 8,34). Nampitandrina i Paoly hoe: “Tsy fantatrao va? Na iza na iza ataonao ho mpanomponao hankatò azy dia mpanompony ianao ary mankatò azy - na mpanompon'ny ota hatramin'ny fahafatesana na ho mpanompon'ny fankatoavana ny fahamarinana » (Romana 6,16). Zava-dehibe ny ota satria manandevo antsika ny fitaoman'ny ratsy.
Io fahatakarana ny ota sy ny fiantraikany io dia tsy mitarika antsika hanangona teny fanamelohana amin'ny olona. Fa kosa, araka ny nanambaran'i Paoly, ny tenintsika dia tokony: «Mitenena amin'ny olona rehetra; izay rehetra lazainao dia tokony ho tsara sy mahasoa. Manaova ezaka hahitana teny tsara ho an'ny rehetra » (Kolosiana 4,6 Fanantenan'ny rehetra). Ny tenintsika dia tokony hitondra fanantenana ary milaza ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny ota sy ny fandreseny amin'ny ratsy rehetra. Ny iray tsy hiteny momba ny iray hafa ihany no manala ny hafatry ny fahasoavana. Araka ny fanamarihan'i Paoly, amin'ny fahasoavany Andriamanitra dia tsy hanary antsika andevo amin'ny ratsy intsony: "Fa misaotra an'Andriamanitra: andevozin'ny ota ianao, nefa lasa nankatò ny endrika fampianarana nomenao". (Romana 6,17).
Rehefa mitombo amin'ny fahafantarana ny fahamarinan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia mahatakatra bebe kokoa ny antony tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny ota. Manimba sy mandratra ny famoronana izany. Manimba ny fifandraisana tsara amin'ny hafa sy manendrikendrika ny toetran'Andriamanitra mandainga momba an'Andriamanitra izay manimba azy sy ny fifampitokisana amin'Andriamanitra. Inona no ataontsika rehefa mahita olon-tiana iray manota isika? Tsy mitsara azy izahay fa mankahala ny fitondran-tena manimba azy ary angamba ny hafa. Manantena sy mivavaka isika fa i Jesosy malalantsika, dia havahana amin'ny fahotany amin'ny fiainana izay nataony sorona ho azy.
Fitoraham-bato an'i Stefana
I Paoly dia ohatra iray mahery amin'ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Nanenjika mafy ny Kristiana i Paoly talohan'ny niovany niova fo. Nijoro teo izy rehefa maty maritiora i Stefana (Asan’ny Apostoly 7,54: 60). Milaza ny fihetsiny ny Baiboly: "tian'i Saoly ny nahafatesany" (Asan’ny Apostoly 8,1). Satria fantany ny fahasoavana be azony azony noho ny fahotan-doza tamin'ny lasa, ny fahasoavana dia mbola olana lehibe teo amin'ny fiainan'i Paoly. Nanatanteraka ny anjarany izy hanompo an'i Jesosy: "Nefa tsy miraharaha ny fiainako aho raha mahavita ny diako fotsiny ary manao ny anjara noraisiko avy amin'i Jesosy Tompo mba hijoro ho vavolombelona hanambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra" (Asan’ny Apostoly 20,24).
Ao anatin'ireo asa soratr'i Paoly dia ahitantsika ny fampitana ny fahasoavana sy ny fahamarinana amin'ny zavatra nampianariny teo ambany fitaoman'ny Fanahy Masina. Hitantsika ihany koa fa nanova an'i Paoly tamin'ny fomba feno lozisialy Andriamanitra ka nanenjika ny Kristiana ho mpanompon'i Jesosy manetry tena. Nahatsapa ny fahotany sy ny famindram-pon'Andriamanitra izy rehefa nanaiky azy ho zanany. Nandray ny fahasoavan'Andriamanitra i Paoly ary nanokana ny fiainany manontolo tamin'ny fitoriana, na inona na inona vidiny.
Manaraka ny ohatra nomen'i Paoly, ny resaka ifanaovantsika amin'ny olombelona dia tokony hiorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mahagaga ho an'ny mpanota rehetra. Ny tenintsika dia tokony hanaporofo fa miaina fiainana tsy misy ota isika amin'ny fampianaran'Andriamanitra mafy orina. «Izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota; fa ny zanak'Andriamanitra mitoetra ao aminy ka tsy afaka manota; satria naterak'Andriamanitra » (1 Jaona 3,9).
Raha sendra olona mifanohitra amin'ny hatsaram-panahin'Andriamanitra ianao fa tsy manameloka azy, dia tokony hitondra azy amin'ny halemem-panahy ianao: «Fa ny mpanompon'ny Tompo tsy tokony hifanditra, fa ho tia ny olona rehetra, mahavoa fampianarana, izay miaritra ny ratsy afaka ary ny fahalemem-panahy no anatra mafy ny tsy marina. Angamba Andriamanitra hanampy azy ireo hibebaka hahalala ny fahamarinana » (2 Tim. 2,24: 25).
Sahala amin'i Paul, ny mpiara-belona aminao mila tena mifanena amin'i Jesosy. Azonao atao ny manompo ny fihaonambe tahaka ny toetranao Jesosy Kristy.